Ulwandle lwabucala kunye nokuloba - indlu enkulu yelizwe
Ijikelezwe ngamanzi kunye namahlathi, le ndlu yelizwe ebukekayo (eyakhiwe ngo-1900) inendawo emangalisayo kwi-peninsula engasese ngasechibini.
Hamba ukuloba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba kunye nokuqubha kumanzi amatsha echibi okanye ube nebarbecue elunxwemeni. Iivenkile ezinkulu kunye nemisebenzi yezemidlalo/yenkcubeko phakathi kwemizuzu engama-20 ngemoto.
Okanye, phumla phambi kwendawo yomlilo ngencwadi elungileyo.
Kukho amathuba angapheliyo okonwabela iholide eyonwabisayo, encinci kwaye esempilweni eSwedish Värmland. Onke amaxesha onyaka anomtsalane wawo.
Indlu ivulekile kwaye ikhululekile kwaye ine-wi-fi kunye nezinto zokudlala ezininzi.
• Ulwandle lwabucala olunemibono emangalisayo
• Onke amagumbi anombono wechibi
• Isikhephe esincinci esinenjini kunye neevesti zobomi ezibandakanyiweyo zokuhlala entwasahlobo/ehlotyeni
• I-BBQ kunye nefenitshala yangaphandle
• Ikhitshi yelizwe elinesitayela sanamhlanje
• Indawo yokudlala kunye nezinto zokudlala zabantwana
• Iindawo zokubasa zangaphakathi (iinkuni zomlilo zibandakanyiwe)
Indalo emangalisayo, izimele kakhulu kodwa isekufutshane nemidlalo emininzi nenkcubeko. Iindwendwe ezininzi zikhetha ukuhlala kufutshane nosingasiqithi ukuze ziqubhe echibini iRottnen, zonwabele indawo entle, ziyokuloba, zichole amaqunube, zipheke ekhitshini elipholileyo, zidlale imidlalo yebhodi kwaye zifunde iincwadi, zihambe intaba (ukuba unethamsanqa dibana nexhama okanye ixhama).
Kwabo banomdla wokwenza uhambo kukho izinto ezininzi onokukhetha kuzo ezifana nepaki yolonwabo yaseSunne Water, iMyuziyam yoBugcisa iAlma Löf, iTheatre yeVästanå, iMårbacka Museum, iRottneros flower and sculpture park (eneendawo zokudlala ezintle zabantwana), igalufa encinci kunye ukubhowula. Indawo entle yegalufa yaseSunne, intenetya kunye neenkundla zepadel zifumaneka kwimizuzu eli-15 ngemoto.
Kwakhona kunokwenzeka ukwenza uhambo losuku ukuya e-Oslo. I-Selma Spa yindawo ethandwayo ye-Spa e-Sunne (imizuzu eyi-15 ngemoto). Banedama lokuqubha, i-massage kunye nonyango lobuhle. Kwimeko yeentsuku zemvula kukho ichibi lokuqubha langaphakathi elonwabisayo, ipaki yetrampoline kunye neziko lokuzonwabisa labantwana eKarlstad.
Unemfihlo epheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho. Nangona kunjalo, ndihlala kunye nosapho lwam efama kwimizuzu engama-20 kwaye ndiya kufumaneka ngefowuni ngaphambi nangexesha lokuhlala kwakho. Kukwakho nosisi ohlala kwilali ekufutshane xa kukho ingxaki.
Nceda ujonge isikhokelo esineengcebiso malunga neendawo zokutyela kunye nezinto onokuzenza ebumelwaneni. Ngokuqinisekileyo wamkelekile ukuba uqhagamshelane nam ukuba ufuna uncedo olongezelelweyo okanye iingcebiso ngexesha lokuhlala kwakho.
Unemfihlo epheleleyo ngexesha lokuhlala kwakho. Nangona kunjalo, ndihlala kunye nosapho lwam efama kwimizuzu engama-20 kwaye ndiya kufumaneka ngefowuni ngaphambi nangexesha lokuhla…